I-IFP iyamphika uNzimande kuyo | IOL Isolezwe
I-IFP iyamphika uNzimande kuyo
Isolezwe / 20 June 2012, 11:19am /
UDkt Blade Nzimande onguNobhala we-SACP okuchithwa amahlebezi okuthiwa enziwe nguMnuz Tony Yengeni we-ANC okuthi wake waba yilungu leNkatha
INKATHA Freedon Party isiphumele obala yathi uNobhala-Jikelele weSouth African Communist Party (SACP) uDkt Blade Nzimande akakaze abe yilungu labo yathi abaveza lezi zinsolo baziqhubela umkhankaso wabo wezepolitiki.
Le nhlangano ikusho lokhu ngemuva kwemibiko yangempelasonto lapho kuthiwa uMnuz Tony Yengeni oyilungu lesigungu esiphezulu ku-ANC “uthuke” uNzimande besemhlanga-nweni wangoMsombuluko owedlule wathi akathule ngoba akazi lutho nge-ANC futhi ungumafikizolo ngoba wayeyi-IFP.
OwayenguMgqugquzeli kazwelonke we-IFP, uMnuz Albert Mncwango okunguye owayebhekele izindaba ezithinta amalungu nabajoyina i-IFP ngeminyaka yo-1980, uthe abantu be-ANC bazidlalela ngoNzimande ngalezi zinsolo.
“Okusixakayo ngale ndaba wukuthi kungani abantu be-ANC beqhubeka nokuphuma iqhubu noNzimande bemsola ngento engekho ekubeni kunenqwaba yezishoshovu ze-IFP eseziphethe izikhundla eziqavile kuKhongolose kodwa okungashiwo lutho ngazo.
“Lokhu abakwenzayo sikubona kungukuzidlalela ngaye, futhi uma kungukuthi wayeyi-IFP yini embi ngalokho ngoba baningi abantu abake baba yiNkatha ngale minyaka edlulile,’’ kusho uMncwango.
Uthe ngisho nabo njenge-IFP ukube uNzimande wayeyi-IFP ngempela ngabe namanje basazishaya isifuba ngokukhiqiza umholi ofana naye futhi ngabe abafihli ukuthi wake waba yilungu labo.
Lezi zonsolo i-SACP isike yazichitha ngoba ithi zingamanga futhi zenziwa yilabo abazama ukubeka kabi ubuholi bayo ngoba kukhona abanye ababebhecwa ngokuthi babeyizimpi-mpi zobandlululo. Omunye wabaholi abadala be-IFP owayezinze eMgungu-ndlovu ngakubo kaNzimande uMnuz David “Gandagand’ongenasteringi” Ntombela, uthe lezi zinsolo zingamanga ngoba uNzimande babengakaze bambone ngisho emibuthwaneni yabo.
Uthe umazi kudala uNzimande nokuze kwagcina ngokuthi ashade nentokazi yakwaNtombela kodwa angahlobene nayo kanti ubengakaze ambone ekwezepolitiki ngaphandle kokuthi ubone esekhonjwa ku-SACP.
Okhulumela i-SACP uMnuz Malesela Maleka uthe le nto isiyabaxaka ukuthi kungani uma kusondela izingqungquthela noma kunezingxoxo-mpikiswano ezishisayo ku-ANC bese abantu beyivusa.
Uthe okubakhathazayo ukuthi le ndaba uma kukuhle akekho ku-ANC oyivezayo ukuze kuhlalwe phansi ikhulunywe noma iphenywe.
“Sizokwenza konke ukuvikela uNzimande kula mahlebezi esiwaziyo ukuthi angamanga,” kusho uMaleka.